Weerar nooca magaaladda Kongsberg ka dhacay ayaa mar kale dhici doona, sirdoonka Norway ayaa sidaas leh - Diblomaasi
Weerarada sida kii lagu qaaday magaalada Kongsberg horaantii bishaan ayaa ah mid aad u adag in la saadaaliyo lagana hortago waxayna u badan tahay inay mar kale dhacaan sababtoo ah heerka bulshada Norway ee furfuran, ayay sheegeen sirdoonka dalka Norway ee loo yaqaano PST.
Adeega Nabadsugida Booliska Norway ee loo yaqaano PST waa wakaalada amaanka booliiska ee Norway. Hay’addan ayaa markii hore loo yaqaannay POT, magaca beddelka waxaa sameeyay baarlamaanka Norway 2dii Juun 2001. Adeegga waxaa la aasaasay 1937-kii iyadoo ay hagaysay Wasaaradda Caddaaladda ee uu hoggaaminayey Trygve Lie.
“Weerarka noocaan ah ee uu qaado qof niyad-sami leh ayaa mar kale dhici doona,” Arne Christian Haugstoeyl, oo ah madaxa la-dagaallanka argagixisada ee hay’adda loo yaqaan PST, ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay wargeyska Aftenposten ee Norway Sabtidii.
“Waxaan u maleynayaa inay ku qasbeyso wadahadal ku saabsan halista ay tahay inaan la noolaano bulsho dimoqraadi ah oo furan.”
Shan qof ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay magaalada Kongsberg ee koonfurta Norway 13-kii Okt, iyadoo tuhmanaha Espen Andersen Braathen, oo 37 jir ah oo haysta dhalashada Denmark, uu dhibbanayaashiisa ku weeraray qaanso iyo fallaadho iyo hub toorey ah oo aan la cayimin.
Sida ay masiibadu ugu dambayn doonto kiisaska noocan oo kale ah waxay ku xiran tahay waqtiga jawaabta booliiska marka loo eego heerka ay hay’ad sirdoon ku guulaysatay inay filayso, ayuu Haugstoeyl u sheegay Aftenposten. Waxa uu intaa ku daray in “suurtagal maaha in la dammaanad qaado inaad joojin karto” weerarka ka hor.
Sannadkii 2017, PST waxay ku wargelisay booliiska Norway in Andersen Braathen, oo ku jiray raadaarka wakaaladda, uu sii daayay muuqaal hanjabaad ah.
“Nasiib darrose, waxaa jira dad badan oo sameeya hadallo naceyb iyo hanjabaad ah,” Haugstoeyl ayaa u sheegay Aftenposten. “Toddobaad kasta waxaan helnaa aqoon ku saabsan tiro aad u badan oo fiidyowyo ah, faallooyin, sawirro iyo qoraallo ka sii adag kana fiidyowgan fiidiyahaan.”
Waxa uu ka gaabsaday mar uu Aftenposten waydiiyay in PST ay samayn karto wax ka duwan sidii looga hortagi lahaa weerarka Kongsberg, wuxuuna sheegay in uu sugi doono gabagabada baadhitaanka madax banaan ee socda ee ku saabsan dib u dhigista bilaysku ee soo qabashada Andersen Braathen iyada oo dhaleecayn loo jeedinayo in jawaabtu ay aad u gaabis ahayd.
Andersen Braathen ayaa qirtay dilka, waxaana markii hore lagu eedeeyay shan dil. Qiimaynta booliiska Norway ayaa lagu sheegay in tuhmanaha xanuunka dhimirka ee muuqda uu sabab u ahaa weerarka, halka hadalka Andersen Braathen ee ah inuu qaatay diinta Islaamka uu noqday khad baaritaan oo aan muhiim ahayn.
Booliska ayaa sheegay Isniintii in dhibanayaasha weerarka ay u badan tahay in la tooriyeeyay ka dib markii Andersen Braathen uu markii hore isticmaalay fallaadho si uu u dhaawaco.
Related Topics:sirdoonka Norway ayaa sidaas lehWeerar nooca magaaladda Kongsberg ka dhacay ayaa mar kale dhici doona
Ciidamada Jabhadda TPLF ayaa Sabtida maanta ah sheegtay in ay qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah ee Dessie ee gobolka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya.
Waddooyinka magaalada Dessie, ee gobolka Axmaarada ee Itoobiya, waa kuwo aad u buuq badan. Sidoo kale waa maqaayadaha iyo baararka. Laakiin markii uu soo dhawaaday dagaalka sokeeye ee Itoobiya, dadkii niyadda ayaa sii madoobaatay. Isbitaalka bannaankiisa waxaa laga dhisay teendho; askarta dhaawacantay ayaa sariiro dul jiifa. Ceeryaamo buureed ayaa ka imanaysa qaylada seeriga ambalaasta.
Afhayeenka TPLF, Getachew Reda, oo wakaaladda wararka ee Reuters kula hadlay telefoon satellite ah ayaa sheegay in ciidankoodu uu kuwa dowladda ka saaray magaalada Dessie ayna ku sii wajahan yihiin magaalada Kombolcha.
Waxa uu sheegay in ciidanka TPLF uu gacanta ku dhigay askar ka tirsan ciidamada Itoobiya. Afhayeenka dowladda Itoobiya, Legesse Tulu, ayaan ka jawaabin codsi ah in uu sheegashada TPLF ka hadlo.
Agaasime iskuul ku yaalla Dessie ayaa Reuters ka soo xigatay in uu arkay ciidamada Itoobiya oo dib uga guranaya magaalada subaxnimadii hore ee Sabtida maanta ah, waxayna u bexeen dhanka magaalada Kombolcha, isagoo sheegay in korontadu ay magaalada ka go’an tahay ilaa Jimcihii.
Qof dadka magaalada ka mid ah oo magaciisa ku soo koobay Amir ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ciidamada Itoobiya ay saaka waabarigii ka bexeen magaalada. Goobjooge kale oo isna magaciisa ku sheegay Maxammed ayaa isna u sheegay AFP in ciidamada TPLF ay magaalada soo galeen.
Haddii la xaqiijiyo, la wareegista Dessie ayaa guul istiraajiyadeed u noqoneysa kooxda TPLF dagaalkeeda ka dhanka ah ciidamada dowladda dhexe ee dalkaasi oo isku dayaya in ay jabhadda ka saaraan gobolka Amxaarada.
Magaaladan ayaa ilaa 385 km u jirta magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, waana magaaladii ugu xaggeysa dhanka koonfureed ee gobolka Amhara ee TPLF ay gaarto tan iyo markii ay gulufkan ku bilowday gobolkan bishii luulyo.
Dhinaca kale, Dowladda Itoobiya ayaa Axaddii lasoo dhaafay laba weerar oo xagga cirka ah ku qaadday bartilmaameedyo ay dawladdu ku sheegtay inay ahaayeen xarumo ay fallaagodu ku leeyihiin Tigray, taas oo noqonaysa duqeymihii toddobaad iyo siddeedaad ee gobollada woqooyi ee uu dagaalladu ka socdo toddobaad gudihiis.
Duqeymahan oo ka durugsan caasimadda gobolka ee Mekele, ayaa muujinayay in milatarigu ay suurtagal tahay in ay ballaariyaan ololahooda duqeymaha xagga cirka ah, taas oo keentay canaan caalami ah iyo in ay hakiyaan duullimaadyadii Qaramada Midoobay ee gobolka ay macluusha ka jirto.
“Maanta wejiga galbeed ee (Mai Tsebri), oo u ahaan jiray tababar iyo boosteejo ciidan oo ka tirsan kooxda argagixisada ah ee TPLF, ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar xagga cirka ah,” ayay tiri afhayeenka dawladda Selamawit Kassa, iyada oo tixraacaysa Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigray TPLF).
Ka dib, Selamawit waxay sheegtay in isla howlgalkaas lagu burburiyay xarun gooni ah oo ku taal waqooyiga magaalada Adwa oo lagu farsamayn jiray “qalabka militariga” iyo sidoo kale dareyska ciidamada ee been abuurka ah ee ay isticmaalaan dagaalyahanada TPLF.
Ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay kooxda TPLF oo iyaduna ku canbaaraysay shaqa joojintii ay horay u samaysay taas oo cadayn u ah sida ay dawladu u xaqirayso nolosha dadka rayidka ah.
Sidoo kale ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhacay Mai Tsebri iyo Adwa midkood.
Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa tan iyo bishii Nofeember ee la soo dhaafay ku jirtay dagaal ka dhan ah kooxda TPLF, inkastoo Tigrayga laftiisa aysan wax dagaal ah ka dhicin tan iyo dabayaaqadii bishii Juun, markaasoo ay fallaagada la wareegeen gacan ku haynta inta badan gobolka waqooyi ee Itoobiya, militariguna ay inta badan isaga baxeen.
Itoobiya ayaa Axaddii laba weerar oo xagga cirka ah ku qaadday bartilmaameedyo ay dawladdu ku sheegtay inay ahaayeen xarumo ay fallaagodu ku leeyihiin Tigray, taas oo noqonaysa duqeymihii toddobaad iyo siddeedaad ee gobollada woqooyi ee uu dagaalladu ka socdo toddobaad gudihiis.
Hase yeeshee Isniintii, ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa laba weerar ku qaaday caasimadda Tigray ee Mekele oo ay Q.Midoobe sheegtay inay ku dileen saddex carruur ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Tan iyo markaas waxaa jiray saddex weerar oo kale oo lagu qaaday Mekele iyo mid kale oo lala beegsaday waxa ay dawladdu ku tilmaantay kayd hub ah oo ku yaal magaalada Agbe, oo qiyaastii 80 kiiloomitir (50 mayl) dhanka galbeed ka xigta.
Duqeymahan ayaa kusoo beegmaya xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobolka Axmaarada ee koonfurta gobolka Tigray.
Waxay canaan kala kulmeen quwadaha reer galbeedka, iyada oo Maraykanku todobaadkii hore cambaareeyay “kordhinta rabshadaha, oo dadka rayidka ah u horseedaya dhibaatooyin.”
QM ayaa hakisay duulimaadyadii
Shaqo joojin Jimcihii lagu sameeyay Mekele ayaa ku qasabtay duulimaadka Qaramada Midoobay oo siday 11 ka mid ah shaqaalaha bini’aadantinimada in ay dib ugu laabato caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, iyadoo Qaramada Midoobay ay intaa ku dartay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay gobolka.
Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa jimcihii dhaleeceeyay ciidamada cirka oo uu sheegay in ay halis galiyeen duulimaadka U.N.
“Cutubyadayada difaaca cirka waxay ogaayeen in diyaarada Qaramada Midoobay loo qorsheeyay inay soo degto, waxaana sabab u ahaa xakameyntooda in aysan ku dhicin rasaas,” Getachew ayaa ku yiri Twitter-ka.
Kooxda TPLF ayaa bayaan ay soo saartay sabtidii ku sheegtay in dhacdadani ay daaha ka qaadayso “ujeedada ay dawladu doonayso inay sii wado carqaladaynta hawlaha bini’aadantinimo.”
Colaadda ayaa kicisay cabsi laga qabo macaluul baahsan, iyadoo Q.Midoobe ay ku qiyaastay inay 400,000 oo qof oo Tigray ah ku riixday xaalad macaluul la mid ah.
Turkiga ayaa Sabtidii cambaareeyay Israa’iil ansixinta dhismaha 3,100 guri oo cusub oo laga dhisayo deegaanno kala duwan oo Israa’iil ah oo ku yaalla Daanta Galbeed ee la haysto toddobaadka soo socda.
“Siyaasad midaysan iyo mid sharci darro ah, oo ay ku jiraan balaadhinta deegaamaynta sharci darrada ah, taas oo burburinaysa aragtida xal laba dawladood ah, taas oo ah ikhtiyaarka kaliya ee lagu heli karo xal cadaalad ah, waara oo dhamaystiran oo laga gaaro khilaafka Falastiin, waa in la soo afjaraa,” Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay.
Waxay ku boorisay beesha caalamka inay qaadaan tallaabo lagu xaqiijinayo ilaalinta dhulka Falastiiniyiinta iyo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta, si loo gaaro nabad iyo xasillooni mustaqbalka fog ee gobolka.
“Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in liiska lix kooxood oo xuquuqda aadanaha Falastiiniyiin ah ay yihiin ururro argagaxiso ay ka soo horjeedo sharciga caalamiga ah. Wasaaradda Caddaaladda ee Israa’iil waxay mamnuucday Taageerada Maxaabiista ee Addameer iyo Xuquuqda Aadanaha, Al-Haq, Xarunta Bisan ee Cilmi-baarista iyo Horumarinta, Difaaca Carruurta Falastiin, Midowga Yurub. ee Guddiyada Shaqada Beeraha (UAWC), iyo Ururka Guddiyada Haweenka Falastiin.
Daanta galbeed: waa dhul xiran oo ka mid ah dhulka Falastiin. Daanta galbeed, waxaa bariga kaga xiga Wabiga Urdun, dhinaca waqooyiga iyo galbeedka iyo koonfurtaba waxaa kaga dhagan xariiqanta Cagaaran oo Israa”il sameesay sanadka marka uu ahaa 1949kii, waa markii uu dhamaaday dagaalkii Carabta iyo Israa’iil 1948ii. Dadka degen Daanta galbeed, waxay gaarayaan, in ka badan 2,4 miliyan oo qof.
Intii lagu guda jiray dagaalkii lixda maalmood ee 1967, Israa’iil waxay qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus, Suuriya Golan Heights iyo Sinai Peninsula, oo markii dambe lagu soo celiyey Masar iyadoo la raacayo heshiis nabadeed.
In ka badan 54,000 oo amarro xarig maamul ah ayaa la duubay.. NGO-yada ayaa sheegay in dhammaan dadka la xiray ay la kulmeen “nooc ka mid ah jirdil ama jirdil maskaxeed, xadgudub xagga akhlaaqda ah, iyo sida loola dhaqmay oo ahayd si arxan darro ah”.
Xiritaan maamul, oo u oggolaanaya mas’uuliyiinta Israa’iil in ay kordhiyaan sii-haynta maxbuus iyada oo aan wax dambi ah lagu soo oogin, ayaa keentay in muddo dheer la haayo iyada oo aan loo marin hanaan sharci oo sharciga waafaqsan.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) waxay xukuntay inay awood u leedahay inay baarto dambiyada culus ee caalamiga ah ee laga galay guud ahaan dhulalka Falastiiniyiinta la haysto, oo ay ku jirto Bariga Qudus. Tan waxaa ka mid ah in laga xukumo dambiyada ka dhanka ah aadanaha ee ka dhici kara Israa’iil gudaha dhulkaas.
Dhanka kale, dadka degan xaafadda bariga Qudus ee Sheekh Jarrah ayaa diidanaa isku dayga si xoog ah looga eryo guryahoodii awoowayaashood duulaankii ugu dambeeyay ee looga saarayo dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool magaalada lagu tartamayo.
Waa maxay khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa’iil?
Xiisada ayaa inta badan u dhexeysa Israa’iil iyo Falastiiniyiinta ku nool Bariga Quddus, Qaza iyo Daanta Galbeed. Qasa waxaa maamula kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas oo marar badan la dagaalantay Israa’iil.
Israa’iil iyo Masar ayaa si adag u maamula xudduudaha Gaza si ay u maamulaan oo ay ugu hortagaan weerarada kaga imanaayo Xamaas, waxaana la isdhihi karaa waa mid kamid ah sababaha uu Mareykanka taageero lacageed iyo mid militari u siiyo Masar madamaa ay difaacayso walaalkeeda bariga dhexe ee israa’iil.
Xiisada u dhaxaysa Israa’iil iyo Falastiin waa mid ka mid ah colaadaha ugu cimriga dheer caalamka, iyadoo qabsashada Israa’iil ee Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza ay gaadhay ku dhowaad 60 sano oo colaad ah. Isku dayo kala duwan ayaa la sameeyay si loo xalliyo iskahorimaadka oo qayb ka ah geeddi-socodka nabadda ee Israa’iil iyo Falastiin.
Dowladda Austria ayaa Sabtidii soo bandhigtay qorshayaal u oggolaanaya muwaadiniinta inay isdili karaan, waliba lagu caawin kara isdilka laga bilaabo sannadka soo socda ka dib markii maxkamad ay xukuntay in xannibaadda hadda jirta ay xadgudub ku tahay xuquuqda aasaasiga ah.
Bishii Diseembar 2020 maxkamadda dastuuriga ah ayaa ku amartay dowladda inay qaado xayiraadii hore u saarneyd dhimashada caawinta, taas oo lagu ciqaabayo qofka isdila ilaa shan sano oo xabsi ah.
Marka loo eego soo koobidda sharciga la soo jeediyay ee wasaaradda caddaaladda, dadka qaangaarka ah ee xanuunsanaya ama la ildaran xaalad joogto ah oo daciif ah waxay awood u yeelan doonaan inay helaan gargaar noloshooda ah.
Laba dhakhtar ayaa ku qasban inay qiimeeyaan kiis kasta, sidoo kale waa inuu ku takhasusay dawaynta xanuunnada ka hor intaan la helin oggolaanshaha si loo hubiyo in euthanasia aanan la raadinayn dhibaato ku meelgaar ah awgeed.
Muddadan waxaa lagu soo gaabin doonaa laba toddobaad bukaanada ku jira “marxaladda ugu dambaysa” ee jirro. Soo jeedinta hadda waxaa hortegi doona khubaro ka hor inta aysan imaan baarlamaanka, halkaas oo la filayo in mudanayaashu ay ansixiyaan ka hor dhammaadka sanadka. Ma jiro xeer cusub oo la dhaqan gelin doono dhammaadka 2021 mamnuucida jirta ee ku saabsan dhimashada caawinta ayaa si fudud meesha uga baxaysa, taasoo ka dhigaysa dhaqanka mid aan sharciyeysnayn.
Hermann Glettler ayaa sheegay in soo jeedinnadu ay ahaayeen “xasaasi iyo mas’uuliyad” oo ah isku dayga in la waafajiyo xukunka maxkamadda dastuuriga ah wuxuuna soo dhoweeyay xaqiiqda inay sidoo kale ku jiraan qorshayaal lagu xoojinayo maalgelinta daryeelka xannuunada.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in ilaalin dheeraad ah lagu daro habka bukaanku u mari doono. Meel kale oo Yurub ah, euthanasia waa sharci Nederland iyo Belgium laakiin caadiyan dawladaha Kaatooliga sida Ireland iyo Poland ayaa ka soo horjeeda xorriyadda noocaan ah
Turkey ayaa si caro leh uga jawaabtay heshiis hub oo balaayin dollar ah oo ay saxiixdeen France iyo Greece, ayada oo ka digtay inuu halis gelin doono xasilloonida gobolka.
France iyo Greece ayaa Talaadadii tagtay saxiixay hesiis is-afgarad oo Athens ay Paris uga iibsaneyso saddex maraakiib dagaal, kaasi oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku qeexay inuu xoojin xooggan u yahay himilooyinka difaaca Midowga Yurub.
Hase yeeshee, Turkey oo xiriir aan wanaagsaneyn la leh dalka ay ka wada tirsan yihiin NATO ee Greece, ayaa cambaareysay heshiiska kuna qeexday mid ka dhan ah Ankara.
“Hubeynta Greece iyo go’doominta iyo fogeynta Turkey, intii iskaashi lala sameyn lahaa, waa siyaasad dhibaato leh oo dhaawici doonta Greece iyo Midowga Yurub, islamarkaana halis gelin doonta xasilloonida iyo nabadda gobolka,” waxaa sidaas yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Turkey.
Macron ayaa Talaadadii sheegay in iibinta maraakiibta aan loola jeedin in loo arko halis ka dhan Ankara, isaga oo ugu yeeray mid looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo ammaanka Meditareeniyaanka, iyo sidoo kale Waqooyiga Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkans-ka.
France iyo Greece ayaa sanadihii dhowaa yeeshay xiriir aad u dhow, halka xiriirka mid walba uu la leeyhaya Turkey uu aad u xumaaday.
Xiriirka Paris iyo Ankara ayaa sanadkii tegay gaaray heerkii ugu xumaa markii madaxweynaha Erdogan Recep Tayyip Erdogan uu ku baaqay in la baaro caafimaadka maskaxda madaxweyne Macron, taasi oo aas uga careysiisay France.
Dhanka kalena, xiriirka Turkey iyo Greece ayaa leh taariikho dagaal iyo isku dhacyo ah.